Inkcazo: I- Libel ishicilelwa ukuhlanjululwa komlingiswa, ngokuchasene nokuchaswa kwetyala, okunyundela. I-Libel inokumtyhila umntu inzondo, inhlazo, ukuhlazeka, ukudekwa okanye ukuhleka usulu; yokonakalisa idumela lomntu okanye ukwenza ukuba umntu avalwe okanye agwenywe; okanye umonakalise umntu kumsebenzi wakhe. I-Libel ingcaciso engamanga. Ukuba ibali leendaba lilimaza kwigama lomntu kodwa lichanekile kwizinto ezixelayo, alikwazi ukuba lihlazo.
Kwaziwa nangokuthi: Ukuhlanjululwa
Imizekelo: uMeya uJohn usongela ukuba angamangaleli intatheli uJane Smith ukuba angabonakali emva kokuba ebhale ibali elichaza ukungakwazi kwakhe nokonakala.
Ubunzulu: Wonke umntu uyazi ukuba "ngamandla amakhulu afika uxanduva olukhulu." Yilokho umthetho ongekho mthethweni. Njengoko intatheli e-United States, sinamandla amakhulu esiza nesiqinisekiso sokuQinisekisa sokuQala kweNkululeko . Kodwa loo magunya kufuneka asebenze ngokufanelekileyo. Kungenxa yokuba intatheli zinegunya lokutshabalalisa iindumiso zabantu, oko akuthethi ukuba kufuneka benze njalo, ubuncinane ngaphandle kokubandakanyeka kwingxelo epheleleyo, enoxanduva.
Okumangalisa kukuba, nangona ukhululo lwenkululeko luye lwafakwa kwisiHlomelo sokuQala ukususela kumgaqo-siseko welizwe , njengokuba siyazi ukuba namhlanje usungulwe ngokutsha nje. Ekuqaleni kweminyaka yama-1960, iqela lamalungelo oluntu labeka isikhangiso kwiNew York Times inxanduva lokuba ukuboshwa kukaMartin Luther King kwiimali zokuhlawula i-Alabama kwakuyingxenye yecala lokunyanzelisa ukunyuswa kwamalungelo oluntu.
ULB Sullivan, umkomishinala wesixeko eMontgomery, eAlabama, wamangalela iphepheni ngenxa yokugqithisileyo waza wanikezelwa ngama-$ 500,000 kwinkundla yelizwe.
Kodwa i-Times yathintela isigwebo kwiNkundla ePhakamileyo yase - United States , eyayiguqula isigqibo senkundla yelizwe. INkundla Ephakamileyo yathi amabhunga karhulumente afana no-Sullivan kufuneka avelise "inkohlakalo yangempela" ukuze anqobe umgwebo.
Ngamanye amagama, amagosa anjalo aya kufuneka abonise ukuba intatheli ezithintekayo ekuveliseni ibali elithembekileyo liyazi ukuba libuxoki kodwa lipapashe njalo, okanye ukuba lipapashile "ngokunganakwa" nokuba ingaba ibali lichanekile.
Ngaphambili, abagwebi beengxoxo babecala ukuba babonise ukuba inqaku elikulo mbuzo lalisenokuba libi kwaye lipapashwe. Ukufuna ukuba izikhulu zikarhulumente zibonakalise ukuba iincwadana zashicilele ngokuziqhelanisa into ethile engabonakaliyo yenza kube nzima nakakhulu ukuphumelela loo matyala.
Ekubeni i-Times kunye nesigwebo sikaSullivan, umthetho uphuhlisiwe ngokukhawuleza ukuba ungabandakanyi nje ngamagosa karhulumente, oko kukuthi abantu basebenzela urhulumente, kodwa nakubantu boluntu, kubandakanye nabani na abavela kwiinkwenkwezi zamatye kwii-CEO zeenkampani ezinkulu.
Ngamafutshane, i-Times ne-Sullivan yenza kube nzima ukunqoba izigwebo zetyala kunye nokwandisa ngokuphumelelayo amandla okushicilela ukuphanda nokubhala ngokukodwa ngalabo abanezikhundla zamandla kunye nempembelelo.
Ngokuqinisekileyo, oko akuthethi ukuba abaphenduli bangasenakuphikiswa. Kuthetha ukuthini ukuba intatheli kufuneka zenze ingxelo ngokucokisekileyo xa zibhala ibali ezibandakanya ulwazi olubi malunga nabantu okanye amaziko.
Ngoko, umzekelo, ukuba ubhala ibali libiza ukuba iorolophu yedolophu yakho idlulisa imali ngokungekho mthethweni kwingxowa-mali yasezidolophini, kufuneka ube neenkcukacha ukubuyela emva. Khumbula, inkohlakalo isichaza ubuxoki, ngoko ukuba into enyanisekileyo kwaye iyinyaniso, ayikho into ekhohlakeleyo.
Amaphephandaba kufuneka aqonde ezi zintathu zikhuseli ezichasene necala lokugweba:
Inyaniso - Ekubeni inkohlakalo isichazwa ngamanga, ukuba intatheli ibika into enyanisekileyo ayikwazi ukuba yinto engathembekiyo, nokuba ingonakalisa idumela lomntu. Inyaniso yinto efanelekileyo yokukhusela isalathisi. Isibalulekileyo senza ingxelo enzulu ukuze ukwazi ukubonisa into ethile.
Ilungelo - Iingxelo ezichanekileyo malunga neenkqubo ezisemthethweni - nantoni na evela kwilingo lokubulala kwintlanganiso yebhunga le sixeko okanye ukuvalelwa kwintlanganiso - ayiyi kuba yintlanzi.
Oku kungabonakala kukukhuseleka okungaqondakaliyo, kodwa cinga ukuba ugxininise ityala lokubulala ngaphandle kwalo. Kuyacaca ukuba, intatheli efihla eso sivivinyo inokugwetyelwa inkohliso rhoqo xa umntu othile enkundleni egwetyelwa ummangalelwa wokubulala.
I-Comment Comment Fair & Criticism - Lo khuselo lubandakanya imibono yombono, yonke into evela kwiimvavanyo ze- movie ukuya kwiikholamu kwiphepha le-op-ed. Iingxelo ezilungileyo kunye nokugxeka ukukhusela ivumela abathengisi ukuba bavakalise izimvo kungakhathaliseki ukuba zibuhlungu okanye zibaluleke kangakanani. Imizekelo ingabandakanywa umgxekayo wegwala ekugqibeleni kwi-CD yakutsha ye-Beyonce, okanye obhala umlobi wezopolitiko okholelwa ukuba uMongameli uBabri wenza umsebenzi owonakalisayo.
Izinto: Izinto ezinomdla kwiNtsundu
UMaya Angelou: Umbhali kunye noMbutho wamaLungelo eMveli
Inkululeko, Inkolo kunye neNtshonalanga
I-RCYBP - I-Radio Carbon Iminyaka Ngaphambi Koku
I-Modern Evolutionary Synthesis